Wararka Maanta: Talaado, Mar 18, 2008-Ciidamo ka amar qaata Dowladda Federaalka iyo Kooxo hubeysan oo isku rasaaseeyay Xaafadda Xararyaale ee Degmada Wardhiigley
Iska hor-imaadka dhexmaray Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Kooxaha hubeysan ee ka soo horjeeday ayaa waxaa uu yimid kadib markii rag bastoolado ku hubeysan ay weerar ku qaadeen Askar ku suganeyd nawaaxiga Isgoyska Xararyaale.
Markii uu dhacay iska hor-imaadka dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa gebi ahaanba xirmay isu socodkii dadkii iyo gaadiidkii isticmaali jiray Wadada Wadnaha, gaar ahaan inta isku xirta Isgoysyada Siinaay iyo Xararyaale, kuwaasi oo socodkooda hakiyay kadib markii ay maqleen rasaasta ay labada dhinac is-weydaarsanayeen.
Iska hor-imaadka ka dhacay Deegaanka Xararyaale ee Degmada Wardhiigley ayaa wuxuu ku soo beegmay iyadoo shalay gelinkii dambe ay Kooxo ku hubeysan Bambo gacmeedyo weerar ku soo qaadeen Ciidamo ku sugnaa Deegaankaas, iyadoo weerarkaasina uu sababay dhimashada Haweeney ka dhaweyd halka uu iska hor-imaadka ka dhacay.
Inkastoo ay xaaladda haatan degan tahay, hadana waxaa weli hakad ku jira isu socodka dadkii iyo gadiidkii isticmaali jiray Wadada Xararyaale, kuwaasi oo inta badan u shaqo tegi jiray Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, Wadada Wadnaha oo kaliya laga isticmaali jiray inta u dhaxeysa Isgoyada Sanca iyo Xararyaale ayaa waxay maanta ka furan tahay kaliya inta u dhaxeysa Isgoysyada Sanca iyo Siinaay, iyadoo inta kale ee isku xirta Xararyaale ilaa Tareebuunka ay u xiran tahay Ciidamo ka amar qaata Dowladda Federaalka Soomaaliya.
3/18/2008 11:01 AM EST